“Waa Doorashaddii u Horeysay ee ka dhacda degmada Xudun, Waxaanay Sugaysaa Xuquuqdayadda” | Somaliland.Org
November 26, 2012	Hargeysa(Somaliland.Org)- Guddoomiyaha degmadda Xudun ee gobolka Sool, Faarax Cali Ibraahim ayaa sheegay in ku faraxsan yihiin inay markii u horeysay jiida degmadaasi ka dhacdo doorashadda dawladaha Hoose ee wadanka ka qabsoomaysa Arbacadda todobaadkan.
“Waxaan maamul ahaan ku faraxsan nahay shacbiga degmaduna aad u soo dhaweeyeen in markii u horaysay ay doorashaddii deegaanku ka qabsoomayso degmadda Xudun iyo jiida hoos yimaada. Arrintaasi waa mid aanu ku faraxsan nahay oo sugaysa xuquuqdayadii,”ayuu yidhi Guddoomiyaha Degmadda Xudun Faarax Cilmi Ibraahim oo xalay khadka Telefoonka ugu waramayay Tifaftiraha Guud ee wargeyska DAWAN Cumar Maxamed Faarax.
Gudoomiyuhu waxa uu sheegay in xalay degmadaasi uu soo gaadhay agabkii doorashaddu, waxase uu u soo jeediyay Komishanka inay maalka degmadda wada shaqayn la yeeshaan si ay u sugaan ammaanka goobaha doorashada lagu qabanayo.
Faarax Cali Ibraahim waxa uu xusay inay dadweynaha degmaddu u han weyn yihiin doorashadan oo ah tii u horeysay ee ka qabsoonta jiidaasi, waxase uu ku dooday inaan bulshada la siinin wacyi gelin ku filan oo ay ku galaan doorashadda.
Previous Post“Xisbiga cilaaq keena ee maxasta caqliga ka xada ee kiciyaa isagaa is riday”Next PostMadaxweynaha Somaliland Oo Booqday Xarunta KULMIYE shacbigana ugu baaqay inay Taageeraan Xisbigiisa	Blog